सिरहामा मानव अधिकार रक्षकको लागि मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न
/ २०७६, १६ पुष बुधबार ०४:१२ प्रकाशीत
– सिरहाको लहानमा मानव अधिकार रक्षकका लागी मिडिया साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भको छ । प्रदेश नम्बर २ मा मानव अधिकारको अबस्था , चुनौतीका विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। प्रदेश नम्बर २ का अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको कार्यालय जनकपुरले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो
। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रदेश नम्बर २ को संयोजक राजु पासवानको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा मानव अधिकारको घटनाहरु नियुनिकर गर्न इन्सेकले आथिक समाजिक र सान्स्कृतिक कुराहरु पत्रकार र मानवअधिर कर्मी बीच छलफल कार्यक्रम भको हो ।प्रदेश २ मा अध्यन र अनुसन्धानमा मुल १६५ घटनाहरु अभिलेखमा उल्लेख रहेको छ । उक्त घटना मधये महिला र बालबालिकाहरु बढी पीडित रहेको प्रदेश संयोजक पासवानले बताए । मानव अधिकार र सञ्चार कर्मीहरु संग तालमेल र बाताबरण मिल्यो भने काम गर्न सहज हुन्छ । देशमा छुवा छुतका घटनाहरु दुई किसिमको घटी रहेको अधिकार कर्मी बिनोद बिसुन्के ले बताए । र सिरहामा अपहरण ,ज्यान मार्ने घटनाहरु सेलाएको छ ।
सिरहामा न्याय दिने ब्यक्तीहरुलाई आफैं थाहा छैन म को हु भनेर अर्को मानव अधिकार कर्मी सुनिल साहले भने नागरिक समाजको जुन आशा र अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ सेलाको छ बताए । अर्को राजनीतिक मुल्य मान्यता लाई जब सम्म बद्लन सकिएन भने तब सम्म बालबिवाह रोकिदै बताए ।प्रदेश नम्बर २ मा एक बर्षमा ६५० घटनाहरु घटेको त्यसमधे सिरहामा १०० वटा घटना घटेको आयोजकले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाको सभापति दिनेश्वर गुप्ताले पहिलाको तुलनामा अहिले पत्रकारहरुको चुनौती अलिकम भको छ् । अहिले धेरै पत्रकार र मानव अधिकार कर्मीहरु छन ब्यापक रूपमा अन्लाईन र पत्रीकाहरु छन ।
पत्रकारहरुमा छमता अभिवृद्धि र मौलिक कुराहरूको कमि देखीको बताए । अतिथिहरुमा सुनिल साह,देब राज पोखरेल , रेनु कर्ण,ओरेक नेपालको संयोजक ज्योति तिवारी लगायत विभिन्न मिडियामा आबद्ध पत्रकार र मानव अधिकार कर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियोे। कार्यक्रम संचालन इन्सेकको जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा परियारले गर्नु भएको थियो ।
सप्तरीमा आगलागी ,चार घर जल्यो
जुम्लामा अब दैनिक लोडसेडिङ, लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक
१. निशान भट्टराईको नयाँ गीत ‘ओई प्यारी’ सार्वजनिक
२. सप्तरीमा आगलागी ,चार घर जल्यो
३. जुम्लामा अब दैनिक लोडसेडिङ, लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक
४. सोलुखुम्बुमा आइचर दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु
५. सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट
१. सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट
२. एलिना चौहान र गणेश ओझाको स्वरमा ‘बडो अप्ठेरो’ गीत सार्वजनिक
३. भुकम्प सुरक्षा दिवशको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
४. आर्मीको विजयी सुरुवात
५. संसद विघटनको विरोधमा मुख्यमन्त्री कार्यलय अगाडि नाराबाजी